रामेछाप साँस्कृतिक महोत्सव : तस्वीर आँफै बोल्छ । – Sunuwar.org
रामेछाप साँस्कृतिक महोत्सव : तस्वीर आँफै बोल्छ ।
सुनुवार डट ओआरजि । कोइँच (सुनुवार) को भू अधिनत्व लेङलेङ (रामेछाप) मा पहिलो पटक सम्पन्न रामेछाप साँस्कृतिक महोत्सवले रामेछापवासीहरुलाई आफ्नो जिल्लाप्रति आत्म गौरव गर्न लगाएको छ । विभिन्न जातजातिहरुको झाँकीहरु समावेश सो महोत्सवलाई शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री वर्षमान पुनले उदघाटन गर्नु भएको थियो । उक्त महोत्सवमा विविध कृषि सामाग्री तथा अन्य व्यवसायिक उत्पादनहरु प्रदर्शनमा राखिएको थियो । to see photos click here
« Sunuwar bhasa Radio 2068-01-17
Sunuwar bhasa Radio 2068-1-21 »
3 Comments to रामेछाप साँस्कृतिक महोत्सव : तस्वीर आँफै बोल्छ ।
Hom sunuwar says:
Namsewal nelle koinch enkali
Ramechhap mahotsav samachar kongunu sapan goaan boo jipti bhag braiba enkali badhai shaybas goaman ramechhap nga dumshyayo belayet mi batike samel dumcha matainse, aasha chha bhabishya mi tainseeb hola, pheri nu shaybas,cheredum.
sudhir sunuwar says:
well done ramechhap mahatsov ka sahabhagi harulai dhanyaebad gyapan garna chhahanchhu.
भागिशोर सुनुवार says:
सम्पूर्ण कोइच हरुप्रती नामसेवाल्
सर्बप्रथम त रामेछाप का सम्पूर्ण सुनुवार हरुप्रती हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस सास्कृतिक महोत्सब ले रामेछाप बासिको मात्र गौरब नभै सम्पूर्ण कोइच (सुनुवार्)प्रती गौरब भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरि नै अन्य जिल्लाबसी हरुले पनि यस्तै कार्यक्रम गर्दै कोइच (सुनुवार्) हरुको गुम्न लागेको भासा, सस्कृति, भेस्-भुसा प्रती उत्थान गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।